UShintsha Guluva waliguqula ibhizinisi lebhola – Bayede News
UShintsha Guluva waliguqula ibhizinisi lebhola
Ukuzalwa kweChiefs kwenza abantu baseSoweto namaphethelo babe nento abazothiba ngayo usizi lobandlululo. Kanti neChiefs ayibaphoxanga njengoba yaqhamuka nezinto ezehlukile ezaheha iso. Ijezi layo elalinombala osagolide nomnyama wathandwa kakhulu.
by nguLinda Ximba Posted on 12 January 2020 12 January 2020
Ilokishi iSoweto eGoli libhekene nezehlo ezimbili kuleli sonto ezishiye izakhamizi zakhona zinokujabha nokujabula. Isonto liqale ngezindaba ezingezinhle zokuwa komuthi omkhulu uDkt uRichard Maponya, obalwa naboHlanga bokuqala abasungula amabhizinisi ngezikhathi ezinzima zobandlululo olwaludla lubi.
Kudlula emhlabeni lo msunguli weMaponya Mall noxhaxha lwamanye amabhizinisi nje futhi owagqugquzela aboHlanga abaningi, elinye iqhawe laseSoweto, uKaizer Motaung, yena ubehambela phezulu njengoba engene emlandweni wokuqeda iminyaka engama-50 asungula iqembu iKaizer Chiefs ngowe-1970. Kumanje kukhulunywa nje iChiefs isidume cishe umhlaba wonke ngenxa yamagalelo ayo enkundleni nangendlela ehleleke ngakhona ngokwebhizinisi.
Kuyinto enkulu ukufinyelela kule minyaka leli qembu laseNaturena lisaphila kwazise uKaizer walisungula ezikhathini ezinzima zobandlululo. Ukuchuma kweChiefs kwanika aboHlanga ngaleso sikhathi ithemba lokuthi into eqalwa owoHlanga iyakwazi ukuphumelela.
Okugqamile kuyo yonke le minyaka iChiefs ivika izivunguvungu ibuye ilethe injabulo ezinkumbini zabalandeli bayo ukuzithoba komholi wayo uMotaung, insizwa ekhulele e-Orlando eminyakeni engama-75 edlule.
Ukuzalwa kweChiefs kwenza abantu baseSoweto namaphethelo babe nento abazothiba ngayo usizi lobandlululo. Kanti neChiefs ayibaphoxanga njengoba yaqhamuka nezinto ezehlukile ezaheha iso. Ijezi layo elalinombala osagolide nomnyama wathandwa kakhulu. Nebhola elinomjiko oya phambili namagoli elaliwaqhulula kwenza lokho kwazinameka ezinhliziyweni zabantu. Ngisho nababengayilandeli iChiefs bachazeka baze bayiqamba ukuthi Abafana Bengqamu Nesitayela. Abanye bayiqamba ukuthi Abafana Bokuthula Noxolo.
Kwenzeka konke lokhu nje iChiefs yayisuke ezinselelweni zokudlala namaqembu abelungu ayemi kahle ngasezimalini anjengonoLusitano, iHellenic, iHighlands Park neWits University ngezikhathi zeNational Professional Soccer League
Nokho ukuzalwa kweChiefs kwaba nezihibe njengoba kwakhipha izidumbu. UShintsha Guluva waqala ukuthwala kanzima esazama ukuyiphemba kwazise wayeqale ukugqama ku-Orlando Pirates eneminyaka engama-16 ngaphambi kokuyodlala e-USA lapho adlala ku- Atlanta Chiefs ngowe-1968.
Ukuqanjwa kweKaizer Chiefs wakususela egameni lakhe neqembu lakhe lakudala lase-USA.
Esanda kubuya phesheya wathola ukuthi kunokungezwani kuPirates wabe esenquma ukuyosungula elakhe iqembu. Bathathu kuphela abadlali okungoThomas Johnson, uRatha Mokgoatlheng no- Edward Khoza, abadube iqembu balandela uMotaung.
Ngesikhathi esinye sezikhulu u-Ewert “The Lip” Nene ezama ukunxenxa omunye umdlali wePilkington United Brothers ukuzosayina kuChiefs, wagwazwa washona. Ngaphandle kokuba nolimi, uNene wayedume ngokuba iqhathanzipho futhi kuthiwa nguye owaba neqhaza ekukhombiseni indlela yokugqoka ngobunono.
Nokho iqembu aliphelanga amandla njengoba cishe wonke umdlali owayeshelwa iChiefs wayengacabangi kaningi ngokulijoyina.
Ubuhlakani bukaMotaung bagqama kakhulu ngokutheza abadlali bohlobo olwalufika lungene khaxa esitayeleni bese kubhujiswa abantu.
Lapha kungabalwa oBanks Setlhodi, uPatrick “Ace” Ntsoelengoe, uMalombo Lichaba, uRyder Mofokeng, uNelson “Teenage” Dladla, u-Abednigo “Shaka” Ngcobo, uMoran” Samora” Khulu, uMarks “Go-Man-Go” Maponyane, uWellington “Muntukalahlwa” Manyathi, uSilvester City Kole, uJimmy “Brixton Tower” Joubert, uFetsi “Chippa” Molatedi, uTrevor “KKK” Mthimkhulu, u-Aaron Nkosi nabanye.
Okwenza uthando kubantu ngeChiefs lwadlondlobala ukuthi kwathi kusaphele iminyaka emine lisunguliwe, lwabutha izicoco ezine okubalwa kuzo eseligi, iLife Challenge Cup, iChampion of Champions ne-BP Top 8 ngowe-1973, we-1974 nowe- 1976.
Isizini -2001/02 ngenye yalawo aletha enkulu injabulo eNaturena. Yayiqeqeshwa uMuhsin Ertugral owayengaziwa ngalutho ngamagalelo akhe esuka eTurkey.
UMphuthumi “Putco” Mafani, owayengumxhumanisi weqembu nabalandeli ngaleso sikhathi, wasungula isiqubulo esithi “Operations Vat Alles”, okuchaza ukuthi “Sishaqa kwasani!”
Nebala iqembu laqeda liqhosha ngendebe ye-BP Top 8, Coca Cola Cup kanye neye-CAF African Cup Winners’ Cup. Lelo qembu laligadla ngabadlali abanamava oDoctor Khumalo, uBrian Baloyi, uThabo “Tsiki Tsiki” Mooki, uCyril Nzama, u-Arthur “10111” Zwane noStanton Fredericks.
Osekugqamile kule minyaka iChiefs yabakhona ukuthi iyinhlava ebizelayo, njengoba kuthi uma iqale into, kubonakale amanye amaqembu aseyilandela. Iyona eyaqala umkhuba wokulanda abaqeqeshi baphesheya.
Phakathi kwabo kungabalwa u-Eddie Lewis noJeff Butler base-England, uMario “Godfather” Tuani waseChile, u-Orlando Casares wase-Argentina, uJoe Frickleton waseScotland, uTheodore “Ted” Dumitru waseRomania, uPhillipe Trousier waseFrance, uWalter da Silva waseBrazil no-Augusto “Njenje” Palacios wasePeru.
NoJomo Sono wasika iphethini kuMotaung ngesikhathi esungula iCosmos ngemuva kokubuya ekudlaleleni iNew York Cosmos yase-USA. Ngesikhathi uKaizer eqopha umlando ngokuqoka indodakazi yakhe endala uJessica ukuqhoqhobala isikhundla sokuhola ithimba lezokukhangisa iqembu, no- Irvin Khoza wenza okufanayo eqasha indodakazi uZodwa osewadlula emhlabeni. Njengoba uKaizer eqashe indodana uBobby Motaung njengeFootball Manager ngokunjalo uKhoza uqashe indodana uNkosana oyiMarketing Director kweZimnyama.
Ngaphandle kwebhola uKaizer uneminye imisebenzi eceleni ayenzayo njengoba engumphathi weKaimot Investments, iKaizer Holdings kanti ungumqondisi kwaConnectivity Partners nakwaMotor Inns.
Kukhulunywa ukuthi iPremier Soccer League ibalwa namaligi ayishumi ahamba phambili emhlabeni, ingenxa yobuhlakani bakhe. Ubeseqhulwini noKhoza ukusungula iPSL ekumanje ishaya